China JYD Fekitari Mutengo Window&wadhiropu Self-adhesive Seals Weather Stripping Manufacture uye Fekitori |JYD
Mirwi yemitsetse yemamiriro ekunze
JYD Fekitari Mutengo Window&wadhiropu Inonamira Yekuzvinamira Seals Weather Stripping
JYD High-quality wool fiber material, yakanaka hair quality, ine 3M adhesive, yakasimba adhesion, soft texture, high flexibility, inogona kutemwa pamadiro, inoshanduka uye inoshanduka, mahwindo haapindi mhepo, guruva.-humbowo, uye kusapinda mvura
Tumira email kwatiri Free samples
Kutsemuka uye maburi akatenderedza mahwindo nemagonhi anogona kukonzera dhizaini kuuya mumba mako, zvichitungamira kumitengo yekupisa uye yekutonhodza.Yedu Weatherstrip Seals inoshandiswa kuvhara maburi mukati memahwindo nemagonhi anogona kuita kuti mhepo ine conditioned uye mhepo yekunze ipinde. Zvinogona kubatsirawo kudzivirira guruva risingadiwe, tumbuyu uye mukume mukati memwedzi inodziya.Ndivo mhinduro huru yekutsiva yekare kana yakasakara gonhi uye zvisimbiso zvemahwindo, kugadzira chipingamupinyi chinopesana nemhepo yekunze.
Adhesive ine 3M uye chena mapepa ekunamira sarudzo
1.High Quality.Iyo tepi yekuisa chisimbiso yehwindo, yakagadzirwa nemamiriro ekunze ane hushamwari yakarukwa zvinhu, inonamira zvakanyanya & yakasimba & isingapindi mvura.Iyi mitsetse yekudzivirira inoshanda kuchengetedza imba yako ichidziya munguva yechando.
2.Multipurpose Mubatsiri.Chengetedza mhepo inotonhora kunze & rega mhepo inopisa ichibuda kubva pahwindo/gonhi regonhi, kuchengetedza simba.Zvakare zvinoshanda kune kusapinda mvura, kusapinda kwemamiriro ekunze, anti guruva, zvipembenene, bug, kudhumhana chinangwa.
3.Inoshanda muMulti Scenario.Inoshandiswa pamativi / pazasi peinotsvedza girazi hwindo / gonhi.Zvakare inokodzera musuwo wedoggie wekutsvedza girazi gonhi, wadhiropu, bookcase, kabati uye nezvimwe.
4.Economic Pack & Easy Installation.Usati washandisa hwindo rekubvisa mamiriro ekunze, chenesa pasi, bvisa chinonamirwa uye chinamira!Zviri nyore kugadzika DIY.
Kunamatira kwakasimba uye hakusi nyore kudonha
zita rechigadzirwa Self-adhesive Weather Strip
color shava /white/gray/mutema/
zvinhu 100% pp
saizi 7*6mm/7*8mm/9*6mm zvichingodaro,yakagadzirirwa
chigadzirwa maitiro Anti-dust/Soundproof/Anti-noise
application gonhi remapuranga, magirazi .aruminiyamu gonhi etc magonhi pasi pemukova
Inonyanya kushandiswa epurasitiki simbi magonhi nemahwindo, aluminium alloy magonhi nemahwindo, magonhi emapuranga nemahwindo uye mamwe ekuvaka ekushongedza magonhi nemahwindo.
Mubvunzo: Iwe uri kambani yekutengesa kana mugadziri?
A: Isu tiri fekitari.
Mubvunzo: Yakareba sei nguva yako yekuendesa?
A: Kazhinji imazuva 5-10 kana zvinhu zviri muzvitoro.kana iri 15-20 mazuva kana zvinhu zvisiri muzvitoro, zvinoenderana nehuwandu.
Mubvunzo: Unopa sampuli here?ndeyemahara here kana kuti yakawedzerwa?
A: Hongu, ndeyemahara.
Q: Ungavimbisa sei kunaka?
A: Chikwata chine ruzivo chemainjiniya uye yakasimba yemhando yekudzora.Kana ukasangana nematambudziko emhando tinovimbisa kutsiva zvinhu kana kudzosera mari yako.Zvigadzirwa zvinotenderwa neSGS, ISO9001.
Q: Ini handisi kuwana ini ndinoda, iwe unogona OEM kwandiri?Zvakadini nehuwandu hweodha shoma?
A: Ehe, isu tiri nyanzvi yeOEM kugadzira anopfuura makore makumi maviri 'chiitiko, tine hukuru hwekugona chirairo, asi isu hatimborambi kuodha diki, iyo MOQ inogona kuita 5000 metres.
Packaging Details: Kurongedza nekatoni yebepa, roller kurongedza nebhegi repurasitiki, wozoisa mukatoni.
4 rolls / carton, 250 metres / roll
Single pasuru saizi: 54 * 28 * 42 cm
Single gross uremu: 5-8kg
Zvakapfuura: Mutengo Wakanakisisa 5 * 6/7 * 5/6 * 6 Mvura isina mvura Strip Door Seals
Zvinotevera: Silicone (isina mvura) inotutira mitsetse yemamiriro ekunze
Isu tiri proffecinal mugadziri wegonhi uye hwindo mamiriro ekunze tambo, tinogona kupa yakanyanya mutengo uye mhando yakanaka, tine mafekitori mana anogona kuendesa panguva.
2. Online kubvunza.
1. Mirayiridzo yekuisa.
2.Hupenyu hwesherufu hwemamiriro ekunze asina silicified ndeye makore 1-3 pasina kuburitswa uye gore 1 mushure mekuburitsa;
Hupenyu hwesherufu hwesilicified weather strip ndeye makore 3-5 pasina kuburitsa uye makore maviri mushure mekuburitsa.
3.Mubvunzo wako uchapindurwa mumaawa maviri.
A: Kazhinji imazuva 5-10 kana zvinhu zviri muzvitoro.kana kuti mazuva gumi nemashanu kana makumi maviri kana zvinhu zvisiri mustock, zvinoenderana nehuwandu.
A: Chikwata chine ruzivo chemainjiniya uye yakasimba yemhando yekudzora.Kana ukasangana nedambudziko remhando,
tinovimbisa kutsiva zvinhu kana kudzosera mari yako.Zvigadzirwa zvinotenderwa neSGS, ISO9001.
Self Adhesive Brush Chisimbiso
Self Adhesive Door Pazasi Chisimbiso
Kuzvinatira Murwi Weather Seal Strip
Self Adhesive Pile Weather Strip
Self Adhesive Chisimbiso
Self Adhesive Seal Weather Strip
Self Adhesive Weather Chisimbiso
Self Adhesive Window Kuvhara Strip
Adhenarian Woven Murwi Weather Stripping
Self-Adhesive Weather Strips
neFin wool pile weather strip yemhando yepamusoro
Murwi Weatherstrip yeWindows & Doors
High Quality mvere murwi mamiriro ekunze shinda yemvere Custo...
5 * 18mm tema mirwi yemamiriro ekunze mitsetse
jyd silicon weather strip soundproof rabha doo...
2fins 7*6mm silicone murwi wemamiriro ekunze mitsetse